ဟဒီးဆ်: ကျွန်ုပ်တို့သည် ခက်ခဲသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ လွယ်ကူသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်တို့ထက်ပိုပြီး ဦးစားပေးခံရသည်ဖြစ်စေ နာခံမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အာဏာပိုင်တို့အား ပုန်ကန်မည်မဟုတ်ကြောင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ထံ၌ ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့ကြသည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ကျွန်ုပ်တို့သည် ခက်ခဲသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ လွယ်ကူသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်တို့ထက်ပိုပြီး ဦးစားပေးခံရသည်ဖြစ်စေ နာခံမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အာဏာပိုင်တို့အား ပုန်ကန်မည်မဟုတ်ကြောင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ထံ၌ ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့ကြသည်။
အမျိုးအစား: ဒအ်ဝဟ်နှင့် ဟိစ်ဗဟ်။ . အစ္စလာမ့် နိုင်ငံရေး။ .
အုဗာဒဟ် ဗင်န် ဆွာမိသ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခက်ခဲသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ လွယ်ကူသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်တို့ထက်ပိုပြီးဦးစားပေးခံရသည်ဖြစ်စေ (အာဏာပိုင်တို့အား) နာခံမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် အသင်တို့သည်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်တော်မှ အထောက်အထားဖြင့် ပေါ်လွင်သည့် ကုဖ်ရ်သွေဖည်မှုကို မမြင်ရသေးသမျှ ၎င်းအာဏာပိုင်တို့အား မပုန်ကန်ကြရန်နှင့် မည်သည့်နေရာ၌ပင်ရှိစေ အမှန်တရားကိုသာ ပြောမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက် မည်သည့် ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့သူ၏ ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုမျှကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မည် မဟုတ်ကြောင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ရစူလ်တမန်တော်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)ထံ၌ ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့ကြသည်။
“ကျွန်ုပ်တို့ ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့ကြသည်။” ဆိုလိုသည်မှာ ဆွဟာဗဟ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟွမ်)များက တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)အား အမိန့်နာခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကြီးကျယ်မြင့်မားတော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မိန့်တော်မူသည်မှာ (အို-သက်ဝင်ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့၊ အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်များကို လိုက်နာကြလေကုန်၊ ထိုနည်းတူစွာ အသင်တို့သည် ရစူလ်တမန်တော်၏ အမိန့်တော်များကိုလည်းကောင်း၊ မိမိတို့အနက်မှ အာဏာပိုင်များ၏ အမိန့်ကိုလည်းကောင်း လိုက်နာကြလေကုန်။) (ကုရ်အာန် ၄း၅၉) ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏နောက် အာဏာပိုင်များတွင်အုပ်စုနှစ်စုရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁)သာသနာ့ပညာရှင်များ (၂)အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်များဖြစ်ကြသည်။ သာသနာ့ပညာရှင်တို့သည် ပညာအရာနှင့်ရှင်းလင်းတင်ပြမှုတို့ကို စီမံခွင့်ရှိကြပြီး၊ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တို့က ပြဌာန်းချက်များကို အကောင်ထည်ဖော်ခြင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းကို စီမံခွင့်ရှိကြသည်။ ဆင့်ပြန်သူက ကျွန်တော်တို့သည် ကိုယ်တော့်အား အမိန့်နာခံမည်ဖြစ်ကြောင်းပဋိညာဉ်ပြုခဲ့ကြသည်ဟုပြောပြီး ဆက်လက်၍ ၎င်း၏ စကား၌ “ခက်ခဲသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ လွယ်ကူသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ” ဟုပါရှိသည်။ ယင်း၏ အလိုသဘောမှာ အုပ်ချုပ်ခံတို့သည် ဥစ္စာပစ္စည်းကျပ်တည်းသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ ချောင်လည်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ နာခံမည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။အုပ်ချုပ်ခံတို့သည် ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ မိမိတို့အားအုပ်ချုပ်သော အာဏာပိုင်များ၏ အမိန့်ကိုနာခံရန်တာဝန်ရှိသည်။ထို့အတူနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ နာခံရမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အုပ်ချုပ်ခံတို့သည် မိမိတို့မကြိုက်သည့်ကိစ္စကို အမိန့်ပေးခြင်းခံရသောကြောင့်ထိုအမိန့်အား မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ သိုမဟုတ် မိမိတို့နှင့်ကိုက်ညီသည့်ကိစ္စကိုအမိန့်ပေးခြင်းခံရသောကြောင့် ထိုအမိန့်အားနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ အမိန့်နာခံရန် တာဝန်ရှိသည်။ “ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုပြီး ဦးစားပေးခံရသည်ဖြစ်စေ”ဟု တင်ပြထားခြင်း၏ အလိုသဘောမှာ အာဏာပိုင်တို့သည် မိမိတို့စည်းစိမ်ခံစားရန် အများပိုင်ဥစ္စာပစ္စည်းကို သို့မဟုတ် အခြားတစ်စုံတစ်ရာကို အုပ်ချုပ်ခံတို့ထက် မိမိတို့ကိုယ်မိမိ ဦးစားပေးကာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ၎င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်ခံအဖြစ် ပြုလုပ်ထားသောသူတို့၏ အခွင့်အရေးကို ပိတ်ပင်တားဆီးလျှင်လည်း ၎င်းတို့၏ အမိန့်ကို နာခံရန်တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းနောက် ဟဒီးဆ်တော်၌ “ကျွန်တော်တို့သည် အာဏာပိုင်တို့အား ပုန်ကန်မည်မဟုတ်”ဟု တင်ပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် အုပ်ချုပ်ရန်တာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် အာဏာပိုင်တို့ထံမှ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကို ရယူရန်အတွက် ပုန်ကန်မည်မဟုတ်ပေ။ ဧကန်အမှန် ထိုသို့ပုန်ကန်ခြင်းသည် မြောက်များစွာသောဆိုးကျိုးများ၊ အဓိကရုဏ်းကြီးများနှင့် မွတ်စ်လင်မ်တို့ကြားတွင် စိတ်ဝမ်းကွဲမှုတို့ကို ဖြစ်စေသည်။ အာဏာပိုင်များအား ပုန်ကန်ခြင်းကြောင့် မွတ်စ်လင်မ်များ ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည်မှာ အွတ်စ်မာန်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)ခေတ်မှစ၍ ကျွန်တော်တို့ခေတ်ထိရှိနေပေသည်။ ဆက်လက်ပြောကြားသည်မှာ “အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ဘက်တော်မှ အထောက်အထားဖြင့် ပေါ်လွင်သည့် ကုဖ်ရ်သွေဖည်မှုကို မမြင်ရသေးသမျှ ၎င်းအာဏာပိုင်တို့အား မပုန်ကန်ကြရန်”ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဤတွင် စည်းကမ်းချက် လေးခုရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အထက်ပါအချက်ကို ကျုးလွန်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပြီး ထိုစည်းကမ်းချက် လေးခုစလုံး ပြည့်စုံသွားသည့်အခါ ၎င်းအာဏာပိုင်တို့အား ပုန်ကန်ရန်နှင့် ၎င်းတို့အား အာဏာမှဖယ်ရှားရန် ကြိုးပမ်းခြင်းတို့ကို ကျွန်တော်တို့ ပြုလုပ်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုစည်းကမ်းချက်များမှာ (၁)“အသင်တို့မြင်တွေ့မှသာ”ဟုဆိုရာ၌ တိကျခိုင်လုံစွာ သိရန်အရေးကြီးသည်။ ထင်မြင်ယူဆချက်ဖြင့် ခေါင်းဆောင်တို့ထံမှ ခွဲထွက်ခွင့်မရှိ။ (၂)၎င်းတို့သည် သာမန်အပြစ်အကုသိုလ်ကျူးလွန်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကုဖ်ရ်အစ္စလာမ့်ဘောင်အပြင်သို့ ရောက်စေသည့် အပြစ်မျိုးကို ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည် အရက်သောက်သည် ဖြစ်စေ၊ တရားမဝင် ကာမကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေ၊ လူတို့အားဖိနှိပ်သည်ဖြစ်စေ စသဖြင့် မည်သို့ပင် အပြစ်အကုသိုလ်ကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေ ခွဲထွက်ခွင့်မရှိ။ သို့သော် အစ္စလာမ့်ဘောင်အပြင်သို့ ရောက်ကြောင်း ထင်ရှားသည့် အပြစ်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့မှသာ ခွဲထွက်ခွင့်ရှိသည်။ (၃)“အလ်ကွဖ်ရုလ်ဘဝါဟ်”ဟူသည် အစ္စလာမ့်ဘောင်အပြင်သို့ ရောက်ကြောင်း ထင်ရှားသည့်အပြစ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ အလ်ဘဝါဟ်ဟူသည် ပေါ်လွင်ထင်ရှားသော အရာကိုခေါ်သည်။ သို့သော် အပြစ်သည် အစ္စလာမ့်ဘောင်အပြင်သို့ ရောက်သည်၊ မရောက်သည်ကို မထင်ရှားဘဲ အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိူးကောက်ယူနိုင်ပါက ထိုအခြေနေမျိုးတွင် ၎င်းတို့အားခွဲထွက်ခွင့်မရှိ။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် အမှုကိစ္စတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ရာ ၎င်းကိစ္စအား ကျွန်တော်တို့က ကုဖ်ရ်အစ္စလာမ့်ဘောင်အပြင်သို့ ရောက်စေသောအပြစ်ဟု ထင်မြင်ကြသည်။ သို့သော် ၎င်းကိစ္စသည် ကုဖ်ရ် မထိုက်ကြောင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိနေလျှင် ကျွန်တော်တို့သည် ၎င်းတို့အား ပုန်ကန်၊ ခွဲထွက်ခွင့်မရှိပေ။ ၎င်းတို့ကိုသာ အာဏာအပ်နှင်းထားရမည်။ သို့သော် အပြစ်သည် အစ္စလာမ့်ဘောင်အပြင်သို့ရောက်ကြောင်း ထင်ရှားနေသည့် ဥပမာ-တရားမဝင် ကာမကျူးလွန်ခြင်းနှင့် အရက်သောက်ခြင်း ကိုပိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ခြင်း စသည့် အပြစ်မျိုးဖြစ်ရမည်။ (၄) “ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အသင်တို့ထံတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံတော်မှ ခိုင်မာသော အထောက်ထားလည်းရှိရမည်။” ဟူသည့် အလိုသဘောမှာ ၎င်းကိစ္စသည် ကုဖ်ရ် ထိုက်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ထံတွင် တိကျခိုင်မာသော အထောက်ထားရှိရမည်။ အကယ်၍ ၎င်းအထောက်ထားသည် ခိုင်မာမှု အားနည်းနေလျှင် သို့မဟုတ် ၎င်းအထောက်ထား၏ ညွှန်ပြချက်သည် အားနည်းနေလျှင် အာဏာပိုင်တို့အား ဆန့်ကျင်ခွဲထွက်ခွင့်မရှိပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ခွဲထွက်ခြင်း၌ အလွန်ဆိုးကျိုးများပြားပြီး ကြီးမားသောပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးမှုများရှိသည်။ အကယ်၍ (ဤအချက်လေးချက်နှင့် ကိုက်ညီသည့်) တစ်စုံတစ်ရာကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိရလျှင်လည်း ကျွန်တော်တို့တွင် ၎င်းအာဏာပိုင်တို့အား ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းရှိမှသာ ပုန်ကန်ခွင့်ရှိသည်။ အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတို့တွင် အာဏာပိုင်တို့အား ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းမရှိလျှင် ပုန်ကန်ခွင့်မရှိပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတို့သည် အာဏာပိုင်တို့အား ပုန်ကန်နိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ပုန်ကန်ခဲ့လျှင် ကျန်ရှိသော ကောင်းမွန်သည့် နိုင်ငံသားများပါ ဖိနှိပ် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချုပ်ကိုင်လာလိမ့်မည်။ ဤအချက်များသည် အာဏာပိုင်တို့အား ပုန်ကန်ခွဲထွက်ခွင့် သို့မဟုတ် မဖြစ်မနေ ခွဲထွက်ရန်လိုအပ်သည့် အချက်များဖြစ်သည်။ သို့သော် စည်းကမ်းချက်တစ်ခုမှာ ပုန်ကန်ခွဲထွက်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ အကယ်၍ ခွဲထွက်နိုင်စွမ်းမရှိလျှင် ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်မရှိပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စွမ်းအားမရှိဘဲ ခွဲထွက်ခြင်းသည် မိမိကိုယ်မိမိ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း ပြုလုပ်ခြင်းသာဖြစ်ပြီး မည်သည့်အကျိုးမျှမရှိပေ။
မကောင်းမှုအကုသိုလ်မှလွဲ၍ အခြားကိစ္စတိုင်းတွင် မွတ်စ်လင်မ်အာဏာပိုင်တို့၏ အမိန့်ကိုနာခံရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ဟဒီးဆ်တော်တွင် တင်ပြထားသည့်အရာအားလုံးကို လိုက်နာခြင်း၏ အကျိုးမှာ မွတ်စ်လင်မ်များ စည်းလုံးသွားပြီး၊ အကွဲလွဲများနှင့် မညီညွတ်ခြင်းများ ပပျောက်သွားမည်။
အာဏာပိုင်တို့သည် ကုဖ်ရ်အစ္စလာမ့်ဘောင်အပြင်သို့ ရောက်ကြောင်း ထင်ရှားသော အမှုကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာ မကျူးလွန်သေးသမျှ ၎င်းတို့အား ပုန်ကန်ခြင်းမပြုရ။ ကုဖ်ရ်ကို ကျူးလွန်သည့်အခါ ၎င်းတို့အား ငြင်းပယ်ရန် လိုအပ်ပြီး မည်သို့ပင် ပေးဆပ်ရပါစေ အမှန်တရားအတွက် ကူညီရမည်ဖြစ်သည်။
အာဏာပိုင်တို့သည် မကောင်းမှုကျူးလွန်သူများ ဖြစ်နေလင့်ကစား ၎င်းတို့အား ပုန်ကန်ခွဲထွက်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အား တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ မပြုပိုင်ကြောင်း တညီတညွတ်တည်းပင် ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းတို့အား ပုန်ကန်ခွဲထွက်ခြင်း၌ ၎င်းတို့ကျူးလွန်သည့် မကောင်းမှုထက် ပို၍ကြီးမားသော ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းများရှိနေသဖြင့် ထိုဆိုးကျိူးနှစ်ခုအနက် ပို၍ပေါ့သောအရာကို လက်ခံလိုက်ရမည်။
နိုင်ငံ့အကြီးကဲနှင့် (ဗိုင်အသ်)ပဋိညာဉ်ပြုခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်နာခံခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်၌သာဖြစ်ရမည်။
နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ ခက်ခဲသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ လွယ်ကူသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ စိတ်နှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဖြစ်စေ ကောင်းမြတ်သည့် ကိစ္စရပ်တိုင်းတွင် နိုင်ငံ့အကြီးကဲ၏အမိန့်ကို နာခံရန် တာဝန်ရှိသည်။
အာဏာပိုင်တို့၏ ဝတ္တရားကို လေးစားသမှုပြုရမည်။ လူတို့သည် အာဏာပိုင်တို့၏ အမိန့်ကို ခက်ခဲသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ လွယ်ကူသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ အခွင့်အရေးပိုယူကြသည်ဖြစ်စေ နာခံရန် အရေးကြီးသည်။
ဒအ်ဝဟ်နှင့် ဟိစ်ဗဟ်။ . အစ္စလာမ့် နိုင်ငံရေး။ .